''पूर्व क.प्रचण्ड,विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ,विचार बदल्नूस्'' - Gokarna News
”पूर्व क.प्रचण्ड,विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ,विचार बदल्नूस्”
काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड र विप्लवलाई नयाँ विचार अंगीकार गर्न सुझाव दिएका छन् । दुवैमा देखिएको वैचारिक समस्याले पछिल्लो परिणाम आएको जिकिर गर्दै उनले ‘कोर्स करेक्सन’को सुझाव दिएका हुन् ।
संविधानविपरीत गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको पक्ष–विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । नेकपाकै नेताबीच पनि प्रतिबन्ध लगाउनु हुन्थ्यो।हुन्थेन भन्नेमा एकमत छैन ।
‘पूर्व क.प्रचण्ड र विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ र एकअर्कालाई संगीन आरोप लगाइरहनुभएको छ ! समस्या व्यक्तिको नभएर विचारको हो ! यो दन्तबझान संसदीय कम्युनिज्म र उग्रपन्थी कम्युनिज्म वीचको हो !’ बाबुरामले ट्विट गरेका छन् ।